XOG RASMI AH: Xukuumada RW Kheyre oo Dalab la yaab leh u dirtay Xukuumada Nairobi | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
XOG RASMI AH: Xukuumada RW Kheyre oo Dalab la yaab leh u dirtay Xukuumada Nairobi
MUQDISHO(P-TIMES) – Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in uu Raysalwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre qaaday mid kamid ah talaabooyinka loo arko in aan la mahdin doonin, kaas oo ku saabsan Xildhibaanada ku shiray magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kuwaas oo cadeeyey in ay saxayaan khaladaadka Xukuumada Faderaalka.
Raysalwasaaraha Soomaaliya ayaa amray in warqad loo dirro Dawladda Kenya, taas oo looga codsanayo in ay joojiso shirarka siyaasadeed eek a socda Kenya, kuwaas oo ay Xukuumada Muqdisho u aragto in looga soo horjeedo.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa warqadaas la mariyey sidda ay xaqiijinayaan Ilo ku dhaw dhaw Xaafiiska Raysalwasaaraha, waxaana la gaarsiiyey Wasaaradda Arrimaha dibada ee dalka Kenya.
Talaabadaas ayaa loo arkaa mid keeni karta xiisad aan meesha oolin oo ah in mooshin laga keeno Raysalwasaare Kheyre, taas oo haddii ay dhacdo horseedi karta jahawareer adag oo siyaasadeed waqtigan.
Xildhibaanada ku sugan magaalada Nairobi qaarkood ayaa wacad ku maray in haddii taasi la qaado ay dhaawacayso Qaranimada & Sharafta Xildhibaanada laguna kala aarsan doono markaas kalfadhiyada soo socda ee baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Xeeldheerayaasha Siyaasadeed ayaa rumeysan in aan la mahdin doonin talaabo noocaas ah, haddii la qaado ayna waajib tahay in ay Xukuumada Raysalwasaare Xasan Cali Kheyre muujiso dadaal kasta oo ku aadan sidii ay ula fariisan lahayd Mudanayaashan oo ay ku xalin lahayd tabashooyinka taagan.